Tele RELAY တစ်ခု - ယာဣ Bolsonaro ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျစ် macron ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု
မူလစာမျက်နှာ » ပုံမှန်မဟုတ်သော • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "ယာဣ Bolsonaro ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျစ် macron ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု
ယာဣ Bolsonaro ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျစ် macron ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang 26 သြဂုတ်လ 2019
ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel macron နှင့်ဘရာဇီးလ်သမ္မတယာဣ Bolsonaro ဇွန်လ 20 28 အပေါ်အိုဆာကာအတွက် G2019 ၏အပေါ်ဆုံးတစ်အစည်းအဝေးတွင်။ (ယာကုပ် WITT / AFP)
ပညာရေး၏ဘရာဇီးဝန်ကြီးအပြိုင်အတွက် "အခွင့်အရေးယူCrétins" သူ့ကိုတောင်းဆို Twitter တွင်ပြင်သစ်သမ္မတကဲ့ရဲ့။ Brasilia နှင့်ပဲရစ်အကြားအနည်းငယ်တင်းမာမှုပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်မယ် statements ။
မိမိအဝန်ကြီးများ၏တဦးတည်း Emmanuel macron အလျောက်ငါတို့၌ပြုနေစဉ်အတွင်းဘရာဇီးလ်သမ္မတယာဣ Bolsonaro, ဂျစ် macron များအတွက် Facebook ကိုထိုးစစ်မှတ်ချက်အပေါ်နင်္ဂနွေနေ့သြဂုတ်လ 25 ထောက်ခံ "အချောင်သမားများCrétins".
ဤရွေ့ကားမကြုံစဖူးတိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင်ပြုမူဖို့ယာဣ Bolsonaro အပေါ် G7 ၏ထိပ်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ပြင်သစ်ထံမှဖိအားများကမကြာသေးမီရက်အတွင်းကြီးထွား Brasilia နှင့်ပဲရစ်အကြားတင်းမာမှုများတစ်ဦးချွန်ထက်တင်းမာမှု, မှတ်သား အမေဇုံအတွင်းသိသိသာသာမီးလောင်မှု.
macron Bolsonaroa"ကကိုလိုနီစိတ်ဓာတ်" ရှိသည်ဟုစွပ်စွဲ, G7 အတွက်အမေဇုံဆွေးနွေးရန်ခေါ်
Bolsonaro ပြင်သစ်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး၏ရူပဗေဒမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတစ်ပို့စ်မှတုန့်ပြန် - အားနည်းချက်တခုရှိပါတယ်ဓာတ်ပုံထင်ရှားကျော်ကြားသော - Michelle Bolsonaro (37 နှစ်), သူမ၏ခင်ပွန်း၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဒတောက်ပနေ့က၏ကနှိုင်းယှဉ်။
macron Bolsonaro persecutes အဘယ်ကြောင့် "အခုသင်နားလည်? " လာမယ့်နှစ်ဦးကိုသမ္မတစုံတွဲများ၏ရုပ်ပုံများကိုတဖတ်။ "ဒါဟာငြူစူသောစိတ်င် [ ... ] macron ငါအလောင်းအစား"အဆိုပါ surfer ရိုဒရီဂိုAndreaçaရေးသားခဲ့သည်။
"အမျိုးအစားကိုအရှက်မနေပါနဲ့ - ဆေးယဉ်ပါး [ "ရယ်မောသေ"] », သူ့ပြင်သစ်အဆွေတော်မှရည်ညွှန်းသမ္မတ Bolsonaro မှတ်ချက်အားဖြင့်ပြန်ကြားခဲ့သည်။
ဒီ post ကိုပြည်နယ်၏ဦးခေါငျးကိုကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီးက AFP ခြင်းဖြင့်မေးခွန်းထုတ်, Planalto ၏သမ္မတနန်းတော်ကနေတစ်ဦးမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရိုးရှင်းစွာ replied: "ကျနော်တို့ကမှတ်ချက်ပေးကြပါဘူး။ "
အရင်းအမြစ်: https: //www.nouvelobs.com/monde/20190826.OBS17546/jair-bolsonaro-se-moque-du-physique-de-brigitte-macron.html
အိန္ဒိယ: BJP ဆောင်းပါး 370 ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အဆက်အသွယ်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာလိုက်သည် | အိန္ဒိယသတင်း